In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 18 12 2018
Tani waa qoraalo ka yimi buuga Ku saabsan Iswiidhan Waxaa​d​ soo dejisa​a cu​tubka 3
Cutubkaan wuxu ku saabsan yahay fursadaha waxbarashada iyo sida ey tahay noloshada ardeyda wax bartaan, iyo xitaa qiimeynta aqoonta wadamada kale.
Bild på kvinna i truck
Sawir: Nixon Johansen Cáceres, Johnér
Adiga waxa xitaa inta ka akhrisankartaa suuqa shaqada, nadaamka iswiidhishka oo suuqa shaqada iyo sidaa adiga shaqo u raadsankartid. Adiga meeshan waxa ka heleysaa warbixin ku saabsan sida shirkad loo aasaasikaro iyo loogu noolankaro, nadaamka bixinta canshuurta iyo caddeynta dhaqliga. Qeyb kamid ah waxey ka hadli ceymisyada bulshada iyo ceymisyada shaqo la'aanta. Qeybkale waxey ka akhrisankarta xilliga firaaqada, dhaqamada iyo nolosha ururada.
Suuqa shaqada Iswiidhan In cid loo shaqeeyo In shaqo la raadsado In aad furato shirkad gaar ah Ceeymiska shaqo la'anta In canshuur la dhiibo Diiwaangaliska dadweeynaha Ceeymiska bulshada ee guud Ku noolashada itaaldarrada Waxbarashada dadka waaweeyn Wakhtiyada firaaqada iyo ururrada bulshada Waxaad soo dejisaa cutubka 3